Maro ireo fitarainana voarain` ny CCO-COVID 19 manoloana ireo fepetra noraisina. Voalohany, mikasika ireo fahazoana alalana mivezivezy manokana izay nosoniavin` ny filohan` ny CCO –COVID-19. Nanamafy hatrany ny ministra fa mbola manankery avokoa ireo fahazoan-dalana nomena tamin` ny fihibohana andiany voalohany nivoaka nanomboka ny 21 martsa teo. Mbola misy ihany koa ny fanomezana alalana eny anivon` ny ATT sy CCO. Hisy, hoy izy, ireo zokiolona haka ny fisotroan-dronono ka tsy voatery eto an-drenivohitra ireny no alainy fa mety any amin` ny faritra hafa. Noho izany, tsy tokony hisy ny fanotohitohina ataon` ireo mpitandro filaminana, hoy hatrany ramatoa ministra. Faharoa, notsiahiviny hatrany fa voarara ny manao fitaterana olona tsy ara-dalàna. Misy mantsy ireo mpitatitra no manararaotra ireny fahazoan-dalana ireny. Efa nisy ny dinika niarahana amin` ireo mpitandro filaminana ka mampitandrina ireo izay minia mandika lalàna ny mpitondra fanjakana. Fanontaniana tena manitikitika ny maro ny fihibohana amin` izao fotoana izao.. Notsiahivin` ny ministra Lalatiana Andriatongarivo fa mila fahatsapahan-tenan'ny olom-pirenena tsirairay ny fiatrehana izao vanim-potoana sarotra izao. Raha miharitra kely manaja ny toromarika isika dia ho voafehy ny aretina, hoy izy. Raha mbola misy ny goragora dia hihamafy ny fepetra saingy miankina amin` ny fanapahan-kevitra izay horaisin` ny filankevitry ny minisitra izany, hoy izy. Marihana fa ny 19 aprily izao no mifarana ny fihibohana raha ny tetiandro voatondro.